हसिना यसपटक नागिनको नागिन बन्ने ! सलमान खानसँग गहिरो सम्बन्ध भएको खुलासा – www.agnijwala.com
चर्चित टिभी शो ‘नागिन’ छिट्टै सानो पर्दामा पुन: दस्तक दिने भएको छ । यस शोमा सलमान खानसँग विशेष सम्बन्ध राखेकी एउटी सुन्दरी देखिनेछिन् ।
नागिन ६ को मुख्य लिडमा परिवर्तन हुनेछ
महक चहलको नाम फाइनल हुनेछ
बिग बोसमा खुलासा
: यदि तपाईं एकता कपूरको शो ‘नागिन’ को ठूलो फ्यान हुनुहुन्छ भने, तपाईंको लागि एउटा ठूलो खुसीको खबर छ। यो शो छिट्टै पर्दामा प्रवेश गर्दैछ र यस पटक एक नयाँ नायिका नागिन बनेर जनतालाई मनोरञ्जन दिन आउनेछन् । यी अभिनेत्रीले धेरै बलिउड फिल्ममा काम गर्नुका साथै ‘बिग बोस’ र खतरों के खिलाडी जस्ता रियालिटी शोको हिस्सा बनिसकेकी छिन् ।
महकको नाम फाइनल हुनेछ
एकता कपूरको आगामी शो नागिन ६ को बारेमा ठूलो खबर आएको छ । नागिन ६ को घोषणा भएदेखि नै यसपटक नागरानी बनेर कुन सुन्दरीले सबैको मनमा राज गर्नेछन् भन्ने अनुमान मानिसहरूले गरिरहेका छन् ? भर्खरैको स्रोतलाई विश्वास गर्ने हो भने अभिनेत्री महेक चहलले नागिन ६ मा मुख्य भूमिका निभाउन सक्नेछन् । महक पछिल्लो पटक रोहित शेट्टीको रियालिटी शो ‘खतरों के खिलाडी ११’ मा देखिएकी थिइन् । इन्डिया फोरमको रिपोर्टका अनुसार एकता कपुरले चाँडै मेहक चहलको नाममा पक्का मुहर लगाउने छिन् ।
केही दिनअघि निर्माता एकता कपूर टिभीको विवादित शो ‘बिग बोस १५’ मा पुगेकी थिइन् । यसै क्रममा एकता कपुरले घोषणा गरेकी थिइन् कि उनी जनवरी २०२२ मा नागिन ६ लन्च गर्दैछिन् । यससँगै एकताले इशारेमा शोको एउटी नायिकाको नाम एम बाट भएको बताएकी थिइन्, जसलाई सलमान खानले पनि राम्ररी थाहा छ ।
नागिन शो यस पटक विशेष हुनेछ
एकता कपूरको घोषणापछि ‘नागिन ६’ मा महिमा मकवानाको एन्ट्री हुने अनुमान गरिएको थियो । कतिपयलाई यस्तो पनि लागेको छ कि एकता कपुरले मौनी रोयलाई नागिन बनाएर फेरि एकपटक मानिसहरूलाई चकित पार्न लागेकी छिन् । तर अब यो खबरबाट यस्तो देखिन्छ कि यस पटक एकता कपुरले फरक सरप्राइज दिनेछिन् ।
चौथो र पाँचौं सिजन फ्लप भए
नागिन फ्रेन्चाइजका पछिल्ला दुई सिजन नराम्ररी फ्लप भएका थिए । कोरोना भाइरस लकडाउनको समयमा नागिन ४ लाई धेरै चोट लागेको थियो, जसका कारण एकताले तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । एकता कपुरले ‘नागिन ५’ मा सुरभी चन्दनालाई कास्ट गरेकी थिइन्, यो सिजन सुरुमा राम्रो चलेको थियो । केही दिनपछि यो सिजनलाई पनि दर्शकले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।